SakhiMan - imihlinzo - Page 2
Imihlinzo: Ihlosi libhokile kwilali yase India libula abantu abamnyama tixi xa begoduka ngobusuku
imihlinzo 3 Comments Sep 15, 2014
Skeem seBEE kuMhlobo: Sithini namhlanje Ihlosi libhokile kwilali yase India libula abantu abamnyama tixi xa begoduka ngobusuku Kulumnkiswe abahlali bale lali ukuba bayi lumnkele lento yenzekayo. Elihlosi kuthiwa ukusukela kumnyaka 2012 okokoko lisenza into enye, libulala abantu abanxilileyo xa begoduka. Sele libulele abantu aba pha ku12 ubunintsi. Owoku gqibela umntu obulewe leli hlosi limbulele ngoLwesine(…)
Imihlinzo: EBirmingaham kuvulwe i5 star hotel yeKati
imihlinzo 2 Comments Sep 11, 2014
Le Imihlinzo niyi phathelwa yimi buliso yakwa La Vita: Ingaba uneLow blood pressure, headache, stress, stroke, period pains, sinus, diabetes, awunamdla wokutya, growth ungakhathazeki sinalo icebo. Sinentlobo ngentlobo zeTea namayeza anaku nceda kwezi zigulo sizi khankanye ngentla. Ukuba unomdla woku fumana lamayeza kunye nezi tea. Nceda qhagamshelana nathi kule nombolo: 074 187 2431 Saku vuyiswa(…)
Imihlinzo: Alitshoni lingena ndaba – Nalo isela liqhekeza kwenye ibar laze labiwa bubuthongo ekhitshini lale bar
imihlinzo 1 Comment Sep 10, 2014
Imihlinzo: Kutshate ooMakhulu ababini kule mpela veki emveni kweminyaka eyi70 bethandana
imihlinzo 1 Comment Sep 9, 2014
Skeem seBee sithini namhlanje Nantso ibhasi yaba khenkethi iphuncuka isteering wheel sayo ihamba Lebhasi iphuncukelwe sisteering wheel sayo ihamba. Ifotwe ngomnye waba khenkethi obekhwele kule bhasi ngelixesha isenzeka lento. Yeey! 🙂 Read more… Kutshate ooMakhulu ababini kule mpela veki emveni kweminyaka eyi70 bethandana Esisibini siye sakhetha ukutshata ebudaleni baso. Baqala ukuhlala kunye kwiminyaka eyi70 edlulileyo,(…)